အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
သင့်အတွက်အောင်မြင်မှုကဘာလဲ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်၊ အောင်မြင်မှုသည်အပြုသဘောဖြင့်အဆုံးသတ်သောလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်သည်။ သို့သော်လူတစ် ဦး စီအတွက်အောင်မြင်မှုသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်လာနိုင်သည်။ အချို့သူများအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာသူတို့၏လုပ်ငန်းခွင်၌နေရာတစ်ခုရရှိရန်၊ အခြားသူများအတွက်၊ တည်မြဲသောအကျိုးသက်ရောက်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများအတွက်ပင်အောင်မြင်မှုသည်၎င်းတို့အားလုံး၏စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်ပဲ ၎င်းကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း၊ ရုန်းကန်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အလုပ်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုအလွယ်တကူတွေ့နိုင်တဲ့အခါမှာတော့အောင်မြင်မှုမရှိဘူး၊ ဒါကလူတချို့ကယင်ကောင်ကိုဘယ်လိုဖမ်းရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး၊ များစွာသောလူတွေကမသိတဲ့ဘ ၀ တစ်ခုရဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်တချို့အောင်မြင်သူတွေသာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။
ဘဝ၏မည်သည့်ရှုထောင့်မှမဆို၊ သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းကိုသီလအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်သင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်လုပ်ဆောင်ရန်သာလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုတိုးတက်စေရန်သင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုမရှိဘူးဆိုတော့ လှုံ့ဆျောမှု, Self- ဝယ်လိုအား, စည်းကမ်း ရလဒ်ကိုမတွေ့မြင်နိုင်မီကတိက ၀ တ်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ယုံကြည်မှုသည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်စွန့်ပစ်ခံရဖွယ်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ လေ့လာသင်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သင်၌လိုအပ်သောကိရိယာများမရှိပါကအောင်မြင်မှုရရန်လက်တွေ့ကျကျမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌သင့်ကိုကူညီရန်နှင့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဤစာမျက်နှာများတွင်သင်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ကိုရှာတွေ့နိုင်မည့်အရင်းအမြစ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အစဉ်စဉ်းစားဖူးသူတို့လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်ရန်၏ဆုကြေးဇူးကိုနှင့်အတူမွေးဖွားသောလူ, အောင်မြင်သောဖြစ်မွေးဖွားသောလူနှင့်မဟုတျပါအခြားသူများရှိပါတယ်ရှိသည်ဟုထင်ဖူး လုံးဝမသေချာမရေရာတဲ့အရာတစ်ခုခု အဖြစ်မှန်ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မှန်ပါသည်၊ ငယ်သောအရွယ် မှစ၍ သတ္တိရှိသည့်ကလေးများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောကလေးငယ်များရှိသည်မှာမှန်ပါသည်၊ သူသည်ငယ်ငယ်ကတည်းကသူတို့လုပ်ခဲ့သမျှကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီစွမ်းရည်တွေရှိတဲ့လူတချို့ပဲရှိတယ်၊ ငါတို့အားလုံးကအဲဒါကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်ဖို့၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုတောင်းပန်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ အဲဒါကိုသင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တာကကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသောရှုံးနိမ့်မှုဆီသို့သာ ဦး တည်သွားမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းလိုချင်ရင်သင်လုပ်နိုင်တယ်၊ သက်သေပြနိုင်ဖို့အောင်မြင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစကားစုတွေပြည့်နှက်နေတယ်။
အောင်မြင်သောသူများ၏စိတ်ဓာတ်၏သော့ချက်များ၊ ပိုပြီးအပြည့်အဝအသက်ရှင်ရန်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အဖြစ်, ပျော်ရွှင်ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သော။ သင်၏လမ်းကြောင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်အတိတ်ကိုထားခဲ့ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့်သင့်ကိုသင်မစွမ်းနိုင်ဟုထင်မြင်စေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွေ့အကြုံများသည်ဘဝကိုပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေသည့်အတွေ့အကြုံများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံး၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဖြစ်သောကြောင့်အနာဂတ်တွင်သင့်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏သင်ယူမှုသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးသင်၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်၊ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်၊ သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်နှင့်သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရန်မလိုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းထောက်မစွာသင်ဟာတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရရှိရန်ခွင့်ပြုပေးသောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်နေထိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဒီစွမ်းရည်အားလုံးထဲကအကောင်းဆုံးကိုလိုချင်ပြီးရယူချင်လို့ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုရှာဖွေချင်တယ်၊ သင့်စွမ်းရည်ကိုကြည့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဖို့သင်တိုက်ခိုက်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားအောင်မြင်ဖို့အတွက်၊ အောင်မြင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ၊ Success tools နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဤအပိုင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် နှင့်သင့်စွန့်ပစ်ခြင်းမှာပစ္စည်း။
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
စုံတွဲများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်စာအုပ်များ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာမြင်ခြင်း
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
စုံတွဲတစ်တွဲအတူတကွသို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဘဝစတင်သောအခါ, သူတို့လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာ ...
မင်းလိုချင်တာကိုလုပ်ပါ။ မှန်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီဟာက Laissez-Faire ခေါင်းဆောင်မှုအမျိုးအစားရဲ့အခြေခံသဘောတရားပဲ။
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား (နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သော) သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လူတစ်ယောက်ဘယ်လိုရလဲ
တခါတရံမှာကံမကောင်းတဲ့သူတွေကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်။ ဒါဟာမှန်ပေမယ့်လူကိုရှိပါတယ် ...
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်း - ၎င်းကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ပါ
လူတ ဦး အနေဖြင့်မိတ်ဖက်ရှာရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုအချိန်တိုအတွင်းရှာဖွေချင်ကြသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ...
လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု - သူတို့ဘာတွေလဲ၊ ဘာတွေလဲ။
လူမှုရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဆိုသည်မှာနှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ခုလုံးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုသောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
ဘ ၀ ၌အောင်မြင်ရန် (ပျော်ရွှင်ရန်) အချက်အလက်များ (၁၄) ချက်